လက်ရှိ သာကေတမြို့နယ်အတွင်းခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အမိုးပြုပြင်နေစဉ် ဖြစ်ပွားနေသော ပဋိပက္ခ နှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအမှန်။ … | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်ပွားအောင် ကြီးထွားအောင် ဖန်တီးနေကြမှုကြောင့် ပြည်သူလူထုအချင်းချင်း ပြဿနာတွေ မဖြစ်စေရန် အထူးသတိပြုကြပါ။လက်ရှိ သာကေတမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဖြစ်ပွားနေသော အဖြစ်အပျက်နှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအမှန်။သာကေတမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဖြစ်ပွားနေသော အဖြစ်အပျက်နှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအမှန်မှာ – ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး သာကေတမြို့နယ် မာန်ပြေ ၁၈လမ်းနှင့် ၁၉ လမ်းကြား၊ အမှတ် (၁၁၂၈)အမှတ်(၃) အစ္စ လာမ် ဘာသာရေး စာသင်ကျောင်း အမိုးပြုပြင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့နှင့် တိုင်း သာသနာရေး ဦးစီးဌာနတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အမိုးပြုပြင်နေစဉ် ရပ်ကွက်အတွင်းမှ လူတစ်ချို့ ရောက် ရှိ လာပြီး ကျောင်းဆိုင်းဘုတ်နှင့် ခြံစည်းရိုးတို့ကို ရိုက်ချိုး ဖျက်ဆီးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် သတင်းထောက် တစ်ဦးနှင့် အစ္စလာမ် သာသနာရေးရာကောင်စီဌာနချုပ် အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးတင်မောင် သန်း နှင့် ဦးဇော်မင်းလတ်တို့အား လူ (၅) ဦးခန့်က ၀ိုင်းဝန်းထိုးကြိတ်၍ လက်ကိုင်ဖုန်းကို အကြမ်းဖက် လုယူခဲ့ကြသောကြောင့် ဒဏ်ရာအနည်းငယ် ရရှိခဲ့ပါသည်။
The Voice Weekly သတင်းဂျာနယ်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာ ရေးထားသလို ဗလီဆောက်လုပ်နေတယ်ဆိုတာ လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး။ The Voice က သက်သက်ဖွတာပါ။ ဒါ ကလေးတွေကို အခြေခံ သင်ကြားပေးနေတဲ့ ဘာသာရေး စာသင်ကျောင်းပါ။ နောက်ပြီး အမိုးပြုပြင်တယ်ဆိုတာကလည်း ခွင့်ပြုမိန့်အရ လုပ်တာပါ။ ဥပဒေပြင်ပလုပ်တာ တစ်ခုမှ မရှိပါဘူးဟု သာကေတမြို့နယ်နေ သူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အာဏာပိုင်များမှလည်း ခွင့်ပြုမိန့်ပေးထားသော အမိန့်ကို ပယ်ဖျက်၍ ကျောင်းအမိုးကို ပြန်လည်ဖျက်ပေးရန် ညွှန်ကြား၍ လာပါသည်။
သတင်း – Xip Xap။
This entry was posted on February 17, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← မည့်သည့်ဘွဲ့ရမဆို တက်ရောက်သင်ကြားနိုင်မည့် အွန်လိုင်းအဝေးသင် ဥပဒေ ဒီပလိုမာသင်တန်း ဖွင့်လှစ်သင်ကြားလျက်ရှိကြောင်း သိရ	“ရခိုင်”၊“ကမန်”နှင့်“မရမာကြီး”တို့အကြား အပြန်အလှန်နားလည်မှုတည်ဆောက်ရေး ဆွေးနွေး →